Ezinye izitudiyo zoopopayi ezifanelekileyo ukuba zifanele | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ayisiyonto intsha namhlanje Uyilo lweMoto le yimfuno enkulu enkulu ngabasebenzi abasele besebenza kwintengiso, uyilo lwegraphic, kunye nezobugcisa, kunye nangabafundi abakwiindawo ezifanayo.
Nangona kunjalo, unokusebenzisa ntoni njenge niselo Ngalo mzuzu wokuphefumlelwa? Ngenxa yalo mbuzo ubuzwa rhoqo, kule posi siza kuthetha ngee studio ezintlanu zoopopayi.
1 Dibana nezitudiyo zoopopayi ezi-5 ezintle
1.1 Imbovane enkulu
1.3 Isitudiyo seCub
Dibana nezitudiyo zoopopayi ezi-5 ezintle
Emva koko, siza kukuxelela malunga ezintlanu studio zoopopayi ngokuqinisekileyo umele uyazi
Le 2017, isigebenga esikhulu sigqibe iminyaka elishumi yamava enikezela Uluhlu olubanzi lweeprojekthi ezingakholelekiyo ngaphakathi kwendawo "yoyilo lokuhamba".
Ukuba kukho into ekufuneka iqatshelwe malunga nomsebenzi wolu phononongo, ziintlobo ngeentlobo zeprojekthi nganye abayenzileyo, ukusukela bayakwazi ukudibanisa isazisi somthengi ngamnye ngophawu lweempawu zobungcali eziqhuba iprojekthi ngendlela emangalisayo.
Ngokunjalo, indlela abaqhele ukunxibelelana ngayo nenethiwekhi yabo, ibonisa ukuba kukho imvakalelo eqhelekileyo ngaphakathi kolu phando, ngokungathi baphakathi kwabahlobo abasoloko bexhasana.
Abanye babathengi beGiant Art zezi: iqonga leSlack, i-TNT, iCosta del Mar, iAsana, uGoogle, iMailchimp, iMpilo yaMadoda, njl.
Ikomkhulu eNew York, eLos Angeles, kunye nenye eSydney, esi studio Liquka iqela labazobi, abayili kunye nababalisi bamabali. U-Buck, naye ukwahluka kwiiprojekthi zakhe, nangona kunjalo, eyona nto inomtsalane kuye ayisiyonto yakhe kuphela, kodwa nekhalenda yakhe yoopopayi.
Ngendlela efanayo nomsebenzi wakho, eyakho kwiphothifoliyo yomthengi Kuyamangalisa, kuba kubandakanya iNike, Google, Instagram, Facebook kunye ne-IBM.
Sisifundo esazalwa sivela kwi- Umdibaniso wamanani amabini abalulekileyo oyilo, Bem Skinner kunye noFraser Davidson.
UDavidson wayenxibe ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kushishino lweopopayi kwaye wakwazi ukuphumelela amabhaso amaninzi ngenxa yoopopayi bakhe. Ukongeza, usebenze kunye neyona nto ibalulekileyo kwihlabathi liphela.
U-Skinner, kwinxalenye yakhe, nangaphezulu kweminyaka elishumi yamava, egxile ngakumbi kwi-SEO, i-UX, ukuthengisa kwi-Intanethi kunye nokuSebenza, kumabala ahambelana noyilo.
Abo bamaziyo uDavidson bayayiqaphela loo nto kukho impembelelo enkulu kuye kwiprojekthi nganye eyenziwa yiCub, hayi kuphela kubuhle bayo kodwa nakwindlela yoopopayi. Nangona kunjalo, lonke iqela linakho ukuzimela xa lisenza umsebenzi walo, esi sesinye sezizathu ezenza ukuba iCub Studio ibe nkulu kakhulu.
Phakathi kwabaxhasi olu phononongo belunalo, ziinkampani ezivela kwicandelo lezemidlalo, ezinjengeNFL, iFox Sports, i-ESPN, iStrava, kunye nabathengi abangaphandle kweli candelo njengeDropbox, Prizeo, Facebook, Expedia, njl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ezinye izitudiyo zoopopayi ezifanelekileyo ukuba zikwazi